Ao amin'ny sary neutron, ny neutron dia tsy maintsy ampidinina amin'ny hafainganam-pandeha takiana amin'ny sary aorian'ny namokarana azy. Ny hafainganam-pandehan'ny neutron dia misy fiantraikany amin'ny halalin'ny fidirana sy ny sary farany, mamela ny fandaminana tsara ny fizotrany. fanaraha-maso ny lasitra, ny fanariana ampahany, ny lelan'ny turbine, ny tsorakazo nokleary ary ny singa avo lenta ao amin'ny sehatry ny indostria sy ny hafa, mba hahitana ireo zavatra mipoaka.
Ny fanadihadihana Neutron activation (NAA) dia tsy mitovy amin'ny sary neutron ary miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny modely DAN Curiosity. Ny fitomboan'ny fampiasana mpamokatra neutron miorina amin'ny fusion ho an'ny sary neutron sy ny tanjona mifandraika amin'izany dia ahafahan'ny fitaovana kely kely sy mandaitra kokoa mipoitra. Iray amin'izany ny programa NEMESIS (rafitra fanentanana sy fitrandrahana finday avoakan'ny finday) na iray aza, mba hanamorana ny fampiasana ireo fitaovana madinidinika, dia afaka mamantatra ny fitaovana fanapoahana (IED) sy ny toeram-pitrandrahana baomba, ary koa ny detector vy sy ny tany radar penetrating (GPR) hahitana tsy misy fitrandrahana vy.
Phoenix LLC, izay tafiditra amin'ny tetik'asa NEMESIS, dia mino fa ny NAA sy ny fitaovana fanaovana sary neutron dia azo ampiasaina amin'ny ho avy tsy ho an'ny asa mampidi-doza ihany, fa koa ho an'ny asa mahazatra toy ny fisafoana ny tetezana sy ny fitsapana ny avionika. ny ezaka izao dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny algorithms momba ny detection ary ny fanaovana fitaovana matanjaka sy mora vidy kokoa.
Na dia toa mahafinaritra be aza ny ankamaroan'ireny, toy ny hoe afaka 'mahita' amin'ny tany, mahita ireo baomba nalevina, na mahita triatra amin'ny lelan-turbine na fefy vy, dia afaka mahita azy io ho mialoha ny teknika fampiasa matetika toy ny taratra X .Hatramin'ny taonjato faha-20, ny taratra X sy ny taratra hafa dia hita fa mora novokarina, saingy ny fizotry ny famokarana neutron maro dia maro amin'ny fomba mahomby nefa tsy mila réacteur fission nokleary dia nihatsara kely nandritra ny am-polony taona maro.
Ny fitaovana Fusion dia manana tombony maro ary tsy sarotra ny mitazona azy.Ho an'ny orinasa fusion tsy mihidy, ny famatsiana solika deuterium-tritium (na deuterium-deuterium) mitohy dia tsy mila fikojakojana, afa-tsy ny fanoloana ireo singa mpamokatra taratra amin'ny generator. Ireo faritra ireo dia an'ny fako radioaktifa ambany sy ambany, izay mitovy amin'ny fako vokarina any amin'ny laboratoara sy hopitaly ary mora ariana.
Na dia mbola lavitra aza ny fitaovana fanaovana scanner amin'ny tanana izay mampiasa loharano neutron ho an'ny famakafakana ny tontolo iainana, ny neutron imaging dia afaka manatsara ny fiainana amin'ny fomba maro, toy ny ataon'ny X-ray.
Ny olana ara-teknika hovahana amin'ny fampiharana ny fiarovana ny taratra ionizing amin'ny teknolojia nokleary 1) Ahoana ny fomba famolavolana tabilao polyethylene misy borosy 8%; (2) Ahoana ny fomba mahatonga ny asidra borika sy polyethylene hitsonika amin'ny hafanana mitovy amin'ny fizotrany, ary tsy mamorona asidra metaborika sy asidra pyroboric, ka mora ny mifangaro, ny hafanana, ny fitrandrahana ary ny famolavolana. 1. Araka ny raika simika H3BO3 sy ny lanjan'ny atôma an'ny asidra borika, ny isan-jaton'ny boron dia isaina ho 17,48%, ary avy eo ny ampaham-lanjan'ny asidra borika dia tokony ampiana ao anaty polyethylene misy molotra 100 kg dia isaina ho 46% , ary ny 8% borosy polyethylene misy boron dia noforonina. 2, ny fivoaran'ny maripana fanodinana asidra boric dia azo atsangana vetivety hatramin'ny 120 ℃ raha tsy misy lo ny lozam-pifamoivoizana azo soloina, fa afaka mampihena ny teboka miempo ny polyethylene avo lenta ka hatramin'ny 120 ℃ B azo avela, hamaha ny olan'ny coking asidra borika. Fampiharana: fiarovana ny taratra neutron amin'ny toby famokarana angovo nokleary, mpamelombelona angovo antonony (avo), reacteur atomika, sambo mpisitrika nokleary, mpiorina fanafody, fitaovana fitsaboana neutron ary toerana hafa.
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana ravina polyethylene borated, taratasy polyethylene boron lead ary vokatra hafa. Afaka manao fanodinana CNC isika araka ny sary. Ny atin'ny boron dia miova endrika 2% ka hatramin'ny 50%. Tongasoa eto hifandray aminay!